Nin maydka hooyadiis bixiyay oo qaraxyo loo isticmaalay | Biyoguurenews.com
Home Wararka Nin maydka hooyadiis bixiyay oo qaraxyo loo isticmaalay
Nin ayaa maydka hooyadiis ku wareejiyay xarun cilmi baaris seyniseed si loogu sameeyo daraasad caafimaad oo xagga xanuunka hilmaamka ah oo uu aaminsanaa in ay wax tarayso bulshada, balse wuxuu hanfariir la kulmay kadib markii uu ogaaday in loo isticmaalay tijaabo dhanka qaraxyada ah.
Todobaadkii hore waxaa soo baxay macluumaad la xiriira fadeexad lagu helay xarun seeynis oo ku taala gobolka Arizona kadib markii ay hawlgal ku fuliyeen ciidamo ka tirsan FBI-da Maraykanka, halkaasna ay ka heleen boqolaal mayd oo xubnahooda jarjaranyihiin, kuwaas oo aan loo haysanin wax ogolaansho ah.
Jim Stauffer ayaa dacwad ku furey xaruntan, wuxuuna sheegay in maydka hooyadiis lagu wareejiyay militariga, kuwaas oo u isticmaalay tijaabo dhanka qaraxyada ah.
Ma jiro diiwaan la ogyahay oo adduunka yaala oo lagu diiwaangaliyo maydadka la siiyo ama loogu yabooho xarumaha cilmi baarista.
Balse waxaa la aaminsanyahay in kumanaan mayd sannad kasta dalka Maraykanka lagu wareejiyo xarumaha caafimaadka , iyada oo sidoo kale loo isticmaalo cilmi baaris kor loogu qaadayo aqoonta caafimaadka iyo dedaalka la dagaalanka cudurada.
Haddaba sidee loo isticmaali karaa maydadka marka ay eheladooda siiyaan xarumaha cilmi baarista iyo isbitaalada?
Maydadka caykan ah waxaa kormeer iyo la socod ku samaysay wasaaradda caafimaadka iyo adeedda dadka ee Maraykanka, waxaana sharci daro ah in la iibsado mayd ama lasii iibiyo, balse waxaa la ogolyahay in qidmad laga qaado qofka taas oo lagu daboolayo qarashka qaadista, gooshinta, iyo waliba kaydinta maydka ama xitaa duugista.
Jaamacadaha ayaa maydadka u isticmaala in ay ardayda ku baraan qaliinka iyo samayska jirka bini’aadamka ee gudaha. Waxaana ka mid ah jaamacadda California oo si hufnaan ah u samaysa hawlahan.
Brandi Schmitt oo ah agaasimaha waaxda cilmi baaristaa jaamacadan ayaa BBC-da u sheegay in waxa laga yeelayo maydka ay ku xirantahay hadba xarunta lagu wareejiyo.
Waxa uu intaas ku daray in shuruucda hadda jira aysan ku filnayn in ay xaq dhawraan maydka iyo sababa loo isticmaalo karo.
Xarunta Arizona ee hadda la xiray ayaa la sheegay in qoysaska ay u balanqaadaysay in si lacag la’aan ah ay ugu duugayso maydadka ama ugu safrineyso ama ugu kaydinayso, taas oo soo jiidatay dad badan oo daqligoodu yaryahay.
Ninka xarunta leh ayaa dambiyo lagu heley sannadkii 2015-kii, waxaana hadda dacwado kala duwan ku furay qoysas uu si qaldan u isticmaalay maydadka qaraabadooda.
Dalka UK waxaa ku yaala illaa 19 xarumood oo aqbala yabooha maydadka ama in maydad la siiyo, waxaana jirta hay’ad dowladeed oo arrimaha qaabilsan.
Balse dalal badan oo adduunka waxaa maydadka xakameeya diinta dadkaas ay haystaan, iyada oo dalalka Afrika qaarkood ay wax aad u xun ka tahay in maydka qofka la bixiyo.
Isbitaalka Aspetar ee Doxa
Dalka Qatar maydadka waa lasoo dhoofsadaa si loogu sameeyo cilmi baaris seeyniseed , waxayna hawshan soconaysay 12 kii sanno ee lasoo dhaafay.
Isbitaalka Aspetar ayaa shaqadaasi qabta, waxaana ku tabobarta arday dunida oo dhan isaga timaada.
Maydadka intooda badan ayaa laga soo dhoofiyaa dalka Maraykanka, waxaana hawshaas qabta illaa 6 wasaaradood oo Qatar ah.
Previous articleShirkii Guddida Fulinta Xisbiga Waddani Oo Saaka Qabsoomey Iyo Qodobo La Ansixiyey
Next articleMadaxweynaha Somaliland Oo U Dhoofay Dalka Sucuudiga Soona Gudan Doona Waajibaada Xajka